घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू इटालियन फुटबल खेलाडीहरू Alessandro Bastoni बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अन्तिम अपडेट गरिएको9सक्छ, 2020
हाम्रो लेखले तपाईंलाई Alessandro Bastoni बचपन कहानी, जीवनी, परिवार, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, प्रेम जीवन, व्यक्तिगत जीवन र जीवन शैली तथ्यहरूको पूर्ण कभरेज दिन्छ। यो उल्लेखनीय घटनाहरूको बृहत् विश्लेषण हो जब उनी एक बच्चा थिए जबदेखि उनी प्रख्यात भए।
प्रारम्भिक जीवन र Alessandro Bastoni को उदय। ।: Picuki
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ उहाँ बीचमा हुनुहुन्छ युरोप मा सबै भन्दा राम्रो युवाहरु, एक जसले आफ्नो बचावत्मक शस्त्रागारमा पर्याप्त जादूगरि थपेको छ।
यद्यपि केवल केही फुटबल प्रेमीहरूले एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको जीवनी पढ्ने विचार गरेका छन् जुन अत्यन्त प्रभावशाली छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Alessandro Bastoni बचपन कहानी:
पहिलो बन्द, उनको उपनाम "Ale“। बायाँ खुट्टे केन्द्रको पछाडि १ April April। अप्रिल १ day तारिखमा उनका बुबा निकोल बास्तोनी र सानो ज्ञात आमा काम्ल्यामाग्गीओरमा जन्मेका थिए जो लोम्बर्डीको क्रेमोना प्रान्तमा अवस्थित इटालीको कमुनमा थिए।
एलेसेन्ड्रो बस्तोनी दोस्रो छोराको रूपमा जन्मेका थिए। उनी close जनाको नजिकको परिवारमा जन्मेका थिए। उनको जीवनको पहिलो महिनाहरूमा फुटबल फुटबल उसको जीवनको केन्द्रबिन्दु भइसकेको थियो। आफ्नो जन्म हुनुभन्दा अघि पनि, सोकर पहिले नै उनको परिवारको डीएनए हिस्सा थियो।
बच्चाको रूपमा, अले आश्चर्यकर्महरू गरे जुन उनको उमेरको कुनै पनि बच्चाको लागि असम्भव ठानिन्थ्यो। प्रारम्भमा (करीव एक बर्षको उमेर), सानो केटो पहिले नै सेरी ए फुटबलसँग कुराकानी गरिरहेका थिए। बेबी एलेसेन्ड्रोलाई आफ्नो आमा, बुवा र उनको परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई खुशी पार्न मशहूर सेरी ए खेलाडीहरूको नाम याद गर्न र कल गर्न मन पराउनु भयो।
यो Alessandro Bastoni को बचपन फोटो को प्रारम्भिक एक हो। ।: इन्स्टाग्राम
इटालियन जियानलुकादिमारिजियोका अनुसार एलेसेन्ड्रोले सर्वप्रथम सेरी ए फुटबलरको नाम उच्चारण गरेकी महिलाको अगाडि उसले पहिलो बच्चा जन्माइन्। उसको शब्दहरुमा:
"मेरो बच्चा, रोसारिया एकदिवसीय इस्त्री गर्दै थिए, र मैले उनलाई एल्बम पास गरें सेरी ए प्लेयरहरूको स्टिकर सहितको टीम। उनी छक्क परिन् कि मैले उनलाई खेलाडीहरूको सबै नाम बताईदिए, उनीहरूको राष्ट्रियता सहित। ”
इटालियन वेबसाइट नुमेरो-डिएजका अनुसार एलेस्सान्ड्रोले फुटबलको माध्यमबाट पढ्न र लेख्न सिके। उसको पहिलो खेल देखाउँदै, बच्चाले खेलाडीहरूको नाम र राष्ट्रियताको उच्चारण सम्बन्धित अक्षर र शब्दहरूसँग जो आफ्नो परिवारको टेलिभिजनको ग्राफिक्समा देखा पर्दछ।
यो उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता अलेको भविष्य र गन्तव्यको सूचक थियो। फुटबलरहरूको नाम याद गर्नु वास्तवमा उसको बाल्यकालको सबैभन्दा यादगार पल हो।
Alessandro Bastoni परिवार पृष्ठभूमि, उत्पत्ति र प्रारम्भिक वर्ष:
सबैभन्दा पहिला र foot फिट central केन्द्रीय डिफेन्डर घरबाट आउँदछ जुन इंटर मिलनलाई समर्थन गर्दछ। अधिक, एलेसेन्ड्रो बस्तोनी परिवार फुटबलरहरूले बनेको छ। के तपाईंलाई थाहा छ? ... फुटबलरका बुबा निकोला, एक पटक एक इन्टर मिलान खेलाडी थिए जबकि उनको आमा, सायद घरमालिका।
सुरुबाटै, एलेसेन्ड्रो बस्तोनीका अभिभावकहरूले फुटबल केन्द्रित घरको संचालन गरे। तिनीहरू प्रकारका थिए जुन आफ्ना छोराहरूसँग फुटबलमा क्यारियरको लागि शिक्षाको एक बिट सम्झौता गरीरहेका थिएनन्। शुरुको दिनदेखि नै निकोला बास्तोनीले आफ्ना छोराहरूलाई नेराज्जुरी संस्कृति दिए।
हाम्रो आफ्नै Alessandro Bastoni कासलमाग्गीओरमा हुर्कियो, उनका भाइबहिनीहरूसँगै, माइचेला नामकी केटी र लूका बाँस्तोनी नामको जेठो दाइ। दुबै भाईहरू (अले र लुका) धेरै राम्रा साथीहरू जस्तै थिए, जो आफ्ना बाल्यावस्थाको समयमा एक अर्कालाई धेरै मन पराउँथे।
फुटबलर ठूलो भाई लुका नामको साथ साथ हुर्कियो। ।: IG
Alessandro Bastoni शिक्षा- बुबाको सपना:
निकोला बास्टोनीसँग अवकाशको सामना गर्न कठिन समय थियो। दूरदर्शी बुबाले योजना बनायो, जुन उसले आफ्ना छोराहरूलाई बास्तोनी परिवारको सपनामा बाँच्न दिनेछ। के तपाईंलाई थाहा छ? ... यो लुका बस्तोनी (एले जेठा दाजु) थियो जसले पहिलो फुटबल खेल्न शुरू गरे।
प्रारम्भमा, एलेसेन्ड्रो बस्तोनीका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराहरूलाई (लुका र एले) आंशिक स्कूलमा जानका लागि अनुमोदन गरे जसले गर्दा उनीहरू फुटबलले काम नगरेको खण्डमा डिप्लोमा कमाउन सक्थे। डिफेन्डरले सोमबार र मंगलबार मात्र मन्टुआको निजी स्कूलमा भाग लियो जबकि फुटबलले हप्ताको अन्य दिनहरू लिएको थियो।
एलेस्यान्ड्रो बस्तोनी फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन:
एलेसेन्ड्रो बस्तोनीले एक पटक स्वीकार गरे कि उनी आफ्नो बुवा र ठूला भाई लुका मार्फत फुटबलको बारेमा उत्सुक थिए। त्यतिखेर, एले आफ्नो साथीलाई फूटबल खेल्नको लागि आफ्नो ठूलो भाइलाई पछ्याउने बानी बसाल्यो जो उनी भन्दा ठूला र ठूला जस्तो देखिन्थ्यो।
बस्तोनी ब्रदर्सको प्रारम्भिक वर्षहरू।
भविष्यको स्टारले ठूला बच्चाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ भन्ने तथ्यले सबै भन्दा धेरै छिटो उसलाई परिपक्व बनायो।
क्यानाटिसे भनिने सानो टोलीका लागि खेल्ने क्रममा अले who बर्षको उमेरमा नो j जर्सी लगाउनु नै पर्छ। जवान केटाले अरूहरू जस्तो नभई, उसको फुटबल भाग्यले उसलाई बोलाइरहेको देख्यो। यति कम उमेरमा उसले आफ्नो सपनाको सौन्दर्य बुझ्न थाले।
युवा फुटबलर सानैदेखि बच्चाको रूपमा, आफ्नो भाग्यले उसलाई बोलाइरहेको देखे
के तपाईंलाई थाहा थियो?… एलेसेन्ड्रो बस्तोनी परिवारका सबै पुरुषहरूले उनीहरूको छिमेकमा रहेको स्थानीय टोली क्यानाटसेससँग केहि गर्नु पर्ने थियो। बस्टोनीका बुबा "निकोला" क्लबको युवा पक्षका प्रशिक्षक थिए र उनका दुई छोरा पनि उनका खेलाडीहरूमध्ये थिए।
एलेसेन्ड्रो बस्तोनी जीवनी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
एलेस्सान्ड्रो बास्तोनीका आमा बुबाको खुशीको सीमा थिएन जब उनीहरूको कान्छो छोरा एट्लान्टाले ट्रायलको लागि बोलाए। Of वर्षको उमेरमा, धेरै भाग्यशाली एले एक सफल परीक्षण पछि क्लबको युवा शाखामा सामेल भए।
त्यस पछाडि र अहिले पनि, एट्लान्टा एक क्लब भएको छ जुन उभरती प्रतिभाहरू पत्ता लगाउन र पालनपोषण गर्न प्रतिष्ठाको साथ परिचित छ। आफ्नो प्रारम्भिक क्यारियर मा अपेक्षित रूपमा, एक कट्टर इच्छाशक्ति Bastoni आफ्नो उमेर समूहहरु मार्फत प्रगति। कुनै समय मा, उनले आफूलाई रक्षा केन्द्र मा एक मनपर्ने को रूप मा स्थापित।
Alessandro Bastoni अटलान्टा ई.पू. संग आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरूमा चित्रण
सफल हुने उनको चाहनालाई स्वीकार गर्दै, एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको परिवारका प्रत्येक सदस्यले उनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले समर्थन गरे। त्यतिखेर, निकोला आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई लगभग १०० किलोमिटर यात्रामा झिंगोनिया (हप्तामा तीन चोटि) आफ्नो छोरोलाई भेट्न जान्छन्। अन्य समय, गर्व बुबा एक मिनीबस सेवा आयोजना हुनेछ।
पारिवारिक भ्रमण र प्रेरणाले युवा उपलब्धिहरू निम्त्यायो। एलेसेन्ड्रो बस्तोनीका अभिभावकहरू आफ्नो छोराले राष्ट्रिय अण्डर १ 17 च्याम्पियनशिप, अण्डर १ Super सुपर कप, अर्को कप र एटलान्टा युवा लिग २०१ 17 र २०१ in मा जित्नको लागि आफ्नो टीमलाई मद्दत गरेको देखेर गर्व गरेका थिए।
Alessandro Bastoni जीवनी- फेम कहानी कहानी:
परिवारको आनन्दको लागि, चम्किरहेको डिफेन्डर, २०१ 2016 मा बर्गामो नर्सरीबाट उडान र colorsहरूसँग स्नातक गरे। युवा स्नातक पछि, एले आफ्नो लागि नाम बनाउने अभियान शुरू गरे।
पछि (२०१ 2016-२०१2017 सीजन), अटलान्टा ई.पू. भर्खरै लोकप्रिय हुन सुरु भयो। को मनपर्दा जबकि पापु गोमेज प्रभुत्व, अन्य ज्ञात खेलाडी- को मनपर्ने Luis Muriel, डुवन जपता र Josip Ilicic राम्रोसँग चिनिएन
बास्तनीले दुबै एटलान्टा र इटाली राष्ट्रिय युवा टीमहरू प्रयोग गरे आफ्नो उपस्थिति प्रख्यात बनाउन। इटालियन पक्षका कप्तानको रूपमा, उनको नेतृत्व र प्रतिरक्षावादी शक्तिको कारण सारा देशभरि ठूलो लहर भयो।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, एलेको व्यक्तित्वले इन्टर मिलान कोचको सतर्क आँखा लिएको थियो एन्टोनियो कन्टे जसले तुरुन्त आफ्नो हस्ताक्षर को लागी धकेला।
एन्टोनियो कोन्टेले ठूलो अन्तर डिफेन्डरको साथमा गर्न सकेन। ।: मिरर र पिकुकी
एलेसेन्ड्रो बस्तोनी जीवनी- प्रसिद्धि उठाउनुहोस् कथा:
अगस्त २०१ 31 को st१ तारिखमा, इन्टर मिलनले ast१ करोड डलरको लागि बस्तोनीमा हस्ताक्षर गर्ने घोषणा गर्‍यो। आफ्नो विकास पूरा गर्न कोन्टेले उनलाई loanण फिर्समा एटलान्टा र त्यसपछि पर्मा पठाए।
Loanणमा हुँदा, बस्तोनीले प्रेरणा लिए सर्जियो रामोस, Leonardo Bonucci र कुनै समय मा, आफ्नो जादूगर उहाँलाई एक अनुभवी मा परिणत। उसको बृद्धिलाई अवलोकन गर्दै इन्टरले theणबाट डिफेन्डर फिर्ता लिनु पर्‍यो।
एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको जीवनी लेख्ने बेलामा, नेराज्जुरी डिफेन्डर नेराज्जुरी रक्षाको लागि नयाँ स्तम्भ बनेको छ। कट्टर डिफेंडरले अन्तर, हावी, अन्य चीजहरूको बीच एक सुरक्षात्मक टोटेम मनपर्दोमा शुरुवात स्थिति जित्यो डिएगो Godin.
बस्थोनीको उदय र उदय। ।: गेटी
पेटमा पुतली देखि किशोरावस्थामा प्रख्यात हुन, Bastone कुनै श doubt्का बिना, आफ्नो पुस्ता को सबै भन्दा बढि इटालियन डिफेन्डर। इन्टर मिलान आज, केटाको उत्कृष्ट प्रदर्शनको अगाडि उनीहरूको जुँगा चाट्नुहोस् (तलको भिडियो हेर्नुहोस्)। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
Alessandro Bastoni प्रेम जीवन- प्रेमिका, पत्नी?
सफल फुटबलर पछाडि, साँच्चै एक ग्लैमरस प्रेमिका छ। Nerazzurri डिफेन्डर मार्टिना Bulgarelli संग एक सम्बन्ध मा (लेखन को समय मा) हो।
फुटबल फ्यानहरूले बास्टोनीको प्रेमिकालाई चिने जब उनीहरू दुवैले उनको छेउमा स्थित बुटेगा डेल सेलर, एक रेस्टुरेन्टको भ्रमण गरे। तल उसको प्रेमी र बुटेगा रेस्टुरेन्ट मालिकको साथ सुपर गर्लफ्रेंड - मार्टिना बुल्गारिलीको फोटो छ।
एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको प्रेमिका, मार्टिना बुल्गारिली (FAR RIGHT) भेट्नुहोस्। 📷 Laprovinciacr
क्षेत्र बाहिर एलेसेन्ड्रो बस्तोनी को हो?
अफ पिच, डिफेन्डर एक शान्त, शान्त र संकलित व्यक्तित्वको रूपमा परिचित छ। उसको उपनाम "एले" को पक्षमा, Nerazzurri डिफेन्डर अक्सर 'एक जवान, वृद्ध मानिस' भनेर चिनिन्छ परिपक्वता को लागी उसले पिच बन्द गर्छ। यस विशेषताले फ्यानहरूलाई विश्वास गरेको छ कि 'उमेर' वास्तवमै केवल एक संख्या हो।
साथै उसको एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको व्यक्तिगत जीवनमा पनि, डिफेन्सिंग कीटाणुले विश्वास गर्दछ कि कुनै पनि चीजले उसलाई तौल गर्दैन, र बालुवाको एक अन्न मात्र उसलाई खुशी पार्न पर्याप्त छ। दुबई डेजर्ट सफारीमा भ्रमण गर्दा एलेस्यान्ड्रोले यसको खुलासा गरे।
केन्द्र पछाडि विश्वास गर्दछ बालुवाको एक अन्न मात्र उसलाई खुशी पार्न
Alessandro Bastoni का शौकहरू:
उसको शौकको सम्बन्धमा, हाम्रो आफ्नै बस्टोनी प्लेस्टेशन र एनबीएको बारेमा उत्कट छ। NBA को सम्बन्ध मा, आफ्नो मनपर्ने बास्केटबलर हो स्टीफन करी गोल्डन राज्य को।
एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको शौक बास्केटबल हो। 📷 FC Inter 1908
जान्नको लागि कसरी नेराज्जुरी डिफेन्डरले आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ, पहिले, अब हामी तपाईंलाई के कमाउँछौं बताउनुहोस्।
एलेस्यान्ड्रो बस्तोनीको तलब:
टट्टोमेरकाटोभका अनुसार, एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको तलब प्रति हप्ता लगभग २€,००० डलर र प्रति मौसम € १.२ मिलियन हो।
Alessandro Bastoni नेट मूल्य र मार्केट मूल्य:
यो टुक्रा राख्दा, बस्तोनीको कुल सम्पत्ति १ मिलियन डलर छ र यसको बजार मूल्य € .१.1० मिलियन (ट्रान्सफर मार्केट) छ।
कसरी Bastoni आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ:
केन्द्र-फिर्ता साल्ट BAE को संरक्षणमा आफ्नो फुटबल पैसा खर्च गर्न चाहान्छ। ऊ कार, ठूला घर (हवेली) र आश्चर्यजनक प्रेमिका (हरू) लाई प्रदर्शन गर्ने कार्यमा छैन जो एक विलासी जीवनशैलीको लक्षण हो।
सेन्टर-ब्याक कारमा छैन तर उनीहरूको फुटबल पैसाहरू साल्ट बेमा खर्च गर्न रुचाउँदछन्: जिम uu
Alessandro Bastoni परिवार जीवन:
अलेको परिवारका लागि त्यहाँ "होम प्राइड" अवस्थित छ। बल सधैं ईन्जिन भएको छ जुन बस्टोनी परिवारमा वर्षौं बित्यो। यसलाई सेरी एमा बनाइसकेपछि आलेले मेरा परिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूले गरेको त्यागको लागि धन्यवाद दिन कहिल्यै रोक्न अस्वीकार गरे।
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई एलेस्यान्ड्रो बस्तोनीका आमा बुबा र उनका परिवारका बाँकी सदस्यहरूको बारेमा अझ बढी बताउनेछौं।
एलेसेन्ड्रो बस्तोनीका अभिभावकहरूको बारेमा:
ठूला अभिभावकहरूले ठूला छोराहरू जन्माए र एलेकी आमा र बुबा एक अपवाद छैन। एमेच्योर फुटबल कोच निकोला र उनकी श्रीमतीले हाल एक प्रतिभाशाली छोराको रूपमा लाभ उठाउँदैछन्।
यो कुरा नबिर्सनुहोस्, एलेसेन्ड्रो बस्तोनीका आमा बुबाको एक पटक अग्निसे नामको बच्चा थियो, जसलाई उनीहरूले अक्टोबर २ 24, २०१ 2015 मा बिल्कुल हराए। भावनात्मक लेखन (तल) ले तपाईंलाई हालै ढिलो भएका एलेस्यान्ड्रो बस्तोनी परिवारका सदस्यको बारेमा बढी जानकारी गराउँदछ। कृपया बायाँबाट दायाँपट्टि पढ्नुहोस्।
प्रियजन गुमाउँदाका टिप्पणीहरू
यहाँ अलेको दोस्रो भावनात्मक नोट यहाँ छ एक परिवार को सदस्य हराउन को सम्बन्ध मा - उनको बहिनी।
Alessandro Bastoni भाइको बारेमा:
अलेको जेठो भाई, लुका बस्तोनी १ 1995 XNUMX in मा जन्म भएको थियो। यो भनाइबाट उनी आफूभन्दा चार बर्षे जेठो छन।
लेख्ने समयमा, Alessandro Bastoni परिवारको पहिलो छोरा (लुका) मन्टुआमा एक टीम संग आफ्नो फुटबल खेल्छ। दुःखको कुरा, ठूलो भाइ जसले आफ्नो सानो भाइलाई फुटबल सिकाउँथे त्यो कहिले पनि एलेसेन्ड्रोले गरेन।
एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको भाइ लुकालाई भेट्नुहोस्
दुबै भाइहरू मध्ये, यो एलेस्सान्ड्रो हो जुन बस्टोनी घरपरिवारको टेनिस खेलाडीको रूपमा आएको छ जुन उनले कुनै पनि इटालियन फुटबलर (सेरी एमा खेल्न) को सर्वोच्च गोलमा पुग्दा धन्यवाद।
Alessandro Bastoni बहिनीको बारेमा:
बाँया खुट्टे केन्द्र पछाडि of को परिवारमा हुर्कियो र उनका माइकल नामकी बहिनी सहित दुई भाईबहिनी थिए। एलेसेन्ड्रो बस्तोनीका अभिभावकले उनको घरको अन्तिम जन्मेको बच्चा उर्फ ​​बच्चाको रूपमा राखेका थिए। माइकल एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर र लोकप्रिय ब्लग को मालिक हो - "AupairWithoutFilters.Travel.Blog"
Alessandro Bastoni नातेदारहरूको बारेमा:
अहिलेसम्म पनि, एलेले उनको बाल्यावस्थाका दिनहरूमा हजुरबा हजुरआमालाई मद्दत गरेको सम्झनाहरू अझै पनी रहेछन्। सानो छँदा, उसले आफ्नो खाली समयको प्रयोग गरेर हजुरबा हजुरआमालाई तिनीहरूको जमिन खेती गर्न मद्दत पुर्‍यायो। यहाँ Alessandro Bastoni शब्दहरू काम गर्दै आएका छन् Gianlucadimarzio अनुसार हजुरबा हजुरआमा तरकारी बगैचा;
"सानो छँदा मलाई नयाँ चीजहरू भेट्न पनि रमाइलो लाग्यो, बगैंचामा टमाटर किन्नको लागि गएको थिएँ तर वास्तवमा मैले अरू कुनै कुरा भन्दा धेरै गडबडी गरिरहेको थियो किनभने मेरा हजुरबा हजुरआमाले जमिन खेती गर्नुभयो।"
Alessandro Bastoni अनटोल्ड तथ्यहरू:
तथ्य # १- किन उसले जर्सी मा नम्बर: 95 W:
सायद तपाईलाई कहिल्यै थाहा भएन, नेराज्जुरी केन्द्रमा नम्बर पहिरिन्छ किनकि अटलान्टा युथ एकेडेमीबाट स्नातक गरेको समयमा आफ्नो भाइ (लुका) लाई गरेको वाचाको कारण।
एलेको विश्वास छ कि यदि लुकाले उनलाई नदेखाएको भए ऊ फुटबलरको रूपमा अवस्थित हुनेछैन। संग एक साक्षात्कार मा बोल्दै फुटबल, केन्द्र फेरि एक पटक भन्यो;
"मैले उनलाई भनें कि मेरो शर्ट नम्बर उसको जन्म वर्ष हुनेछ। 95।। नम्बर लगाउनु भनेको लुका र मेरो परिवारका बाँकी सदस्यहरूसँगै पिचमा खेल्नु नै हो।"
तथ्य # १- Alessandro Bastoni फुटबल आइडल:
फ्यान मायालु डिफेन्डरहरू, मनपर्दछ बेन चिल्लोवेल, निक्लास सेल, इब्राहिमा कोनाटे र डेनीले रग्नी सबैको रोल मोडेल हुन्छ। हाम्रो आफ्नै बस्तोनी एक रियल मैड्रिड प्रशंसक हो, जसले प्रशंसा र देख्दछ सर्जियो रामोस उनको रोल मोडेलको रूपमा। आफ्नो प्रशंसाको बारेमा कुरा गर्दै, डिफेन्डरले एक पटक भने;
"म सर्जियो रामोसको धेरै प्रशंसा गर्दछु, र ऊ क्लासिक डिफेन्डर होईन जसले बचाव गर्छ र केही गर्दैन। उहाँ बलमा धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ। उसको स्तरसम्म पुग्न असम्भव भए पनि म उनी जस्तै असल हुन चाहन्छु। ”
तथ्य # १- Alessandro Bastoni ट्याटू:
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, एलेसेन्ड्रो बस्तोनी बचपनको कथा राम्रोसँग आफ्नो हातमा ट्याटुको रूपमा चित्रण गरिएको छ। अग्लो डिफेन्डरसँग अन्य ट्याटूहरू पनि हुन्छन्, पहिलो शेर हो, अर्को घडी हुन्छ अन्त्यमा, फूल हो। एलेस्यान्ड्रो बस्तोनीको प्राय: ट्याटू २०१ in ईलोको ट्राभाग्लियटोमा अवस्थित एलो ट्याटू आर्ट स्टुडियोले हस्ताक्षर गरे।
Alessandro Bastoni ट्याटूहरू
तथ्य # १- Alessandro Bastoni वेतन ब्रेकडाउन:
एन्टोनियो कोन्टेले आफ्नो सम्झौताको नविकरण गर्दा इटालियन डिफेन्डरले हप्ताको २€,००० डलर र १.२ लाख डलर वार्षिक तलब पायो। हामीले Alessandro Bastoni को तलब संख्यामा क्रunchच गर्न हाम्रो समय लिएका छौं, र यसले प्रति वर्ष, महिना, हप्ता, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्डमा के कमाउँछ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ।
प्रति महिना: € 100,000 £ 87,976 $ 109,565
प्रति हप्ता: € 23,226 £ 20,271 $ 25,245
प्रति दिन: € 3,222 £ 2,896 $ 3,606
प्रति घण्टा: € 134 £ 121 $ 150
प्रति मिनेट: € 2.24 £2$ 2.5
प्रति सेकेन्ड: € 0.04 £ 0.03 $ 0.04
माथिको वेतन तथ्या .्कमा आधारित, यो के हो एलेस्यान्ड्रो बस्तोनी तपाईं पछि कमाएको छ यो पृष्ठ हेर्न शुरू भयो।
वाह! के तपाईंलाई थाहा छ?… इटालीमा औसत व्यक्ति जसले प्रतिमहिना E E3,680० यूरो कमाउँछ उसले एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको तलबको एक महिना मात्र कम्तीमा दुई वर्ष र तीन हप्ता काम गर्नुपर्दछ।
Alessandro Bastoni जीवनी- Wiki डाटा
पुरा नाम एलेस्यान्ड्रो बस्तोनी
जन्मे: 13 अप्रिल 1999
उमेर: २१ (मे २०२० को रूपमा)
अभिभावक: श्रीमती र श्रीमती निकोला बास्तोनी
भाइ: लुका बस्तोनी
बहिनी: Michela Bastoni
फिटमा उचाई6फिट3इन्च
मीटरमा उचाई 1.91 m
नेट मूल्य € 1 मिलियन
सोख बास्केटबल र गेमि ((प्लेस्टेशन)
फेरि अर्को पढ्नको लागि धन्यबाद बाल्यकाल कहानी र जीवनीयस समय, एलेसेन्ड्रो बस्तोनीको। हाम्रो सम्पादकहरू यसमा LifeBogger युवा कथाहरू र फुटबलरहरूको बायो लेख्ने सामान्य तालिकामा शुद्धता र निष्पक्षताका साथ प्रयास गर्नुहोस्।
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा टिप्पणी दिनुहोस् यदि तपाईंले केही देख्नुहुन्छ जुन एलेसेन्ड्रो बस्तोनी बचपनको कहानी र जीवनी तथ्या on्कहरूमा यस लेखमा सही देखिँदैन। अन्यथा, टिप्पणी अनुभागमा हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईं हाम्रो लेखन र फुटबलरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ।